သမားရိုးကျလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်စကင်နာသည်စမ်းသပ်Areaရိယာ၏ကြိုးမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအမှန်တကယ်ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ၎င်းကို CW (Continuous Wave) Signal Testing, Network Optimization Road Testing နှင့် Room Distribution Systems အတွက် Network Optimization Work များတွင်အသုံးပြုသည်။ The C ကိုကြည့်ကြရအောင် ...
Insulation Resistance Tester (Intelligent Dual Display Insulation Resistance Tester ဟုလည်းခေါ်သည်) insulation Resistance ကိုတိုင်းတာရန်သုံးမျိုးသောစမ်းသပ်မှုအမျိုးအစားများရှိသည်။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုစီသည်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်သောကိရိယာ၏သီးခြားကာကွယ်ခြင်းလက္ခဏာများကိုအာရုံစိုက်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုသူသည်ရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။
Insulation Resistance Tester နှင့်မြေပြင်ခုခံရေးစမ်းသပ်သူအကြားစမ်းသပ်နည်းစနစ်များ (၁) Insulation Resistance Tester ၏စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်း Insulation Resistance Tester သည်အဆင့်များ၊ အလွှာများနှင့်ဝါယာကြိုးများနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးများကြားခံအချက်အခြာများအကြားရှိအပူချိန်ကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ The အဆင့်မြင့်အဆိုပါစမ်းသပ်မှု Va ...
Insulation Resistance Tester အမျိုးမျိုးသောလျှပ်ကာပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၏ခံနိုင်ရည်တန်ဖိုးနှင့် Transformers၊ Motors, Cables, Electrical Equipment နှင့်စသည်တို့၏ insulation Resistance ကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ 01 T ၏တိုတောင်းသောတိုက်နယ်စီးဆင်းမှုသည်အဘယ်အရာကိုဖြစ်စေသနည်း။
Insulation Resistance Teste အကြောင်းမကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ
Insulation Resistance Tester သည်အမျိုးမျိုးသောလျှပ်ကာပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၏ခံနိုင်ရည်အားတန်ဖိုးကိုတိုင်းတာရန်နှင့် Transformers၊ Motors၊ Cables နှင့် Electrical Equipment များ၏ Insulation Resistance ကိုတိုင်းတာရန်သင့်လျော်သည်။ ဤပစ္စည်းကိရိယာများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့်လိုင်းများသည်ပုံမှန်အခြေအနေတွင် El ကိုရှောင်ရှားရန်ပုံမှန်အခြေအနေတွင်အလုပ်လုပ်သည်ကိုသေချာစေရန် ...
ကျွန်ုပ်နိုင်ငံသည်အိမ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အီလက်ထရောနစ်နှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအတွက်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာခဲ့ပြီး၊ ၎င်း၏ပို့ကုန်ပမာဏဆက်လက်တိုးတက်နေပါသည်။ စားသုံးသူများ၏ကုန်ပစ္စည်းလုံခြုံမှု၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီထုတ်လုပ်သူများက ဆက်လက်၍ ...
High-Voltage ဒီဂျစ်တယ်မီတာ (Voltage Divider) ကို Power System နှင့်လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုများတွင်ပါဝါကြိမ်နှုန်း AC အမြင့်ဗို့အားနှင့် DC အမြင့်ဗို့အားတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသည်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက် English Name: SGB-C AC&DC ဒီဂျစ်တယ် HV မီတာဒီဂျစ်တယ်မြင့်ဗို့အား ...
စမ်းသပ်ထားသည့်ကုန်ပစ္စည်းသည်သတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ၊ စမ်းသပ်ခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အသုံးပြုသူများ၏လုံခြုံမှုကိုပုံမှန်အသုံးပြုရန်သေချာစေရန်အလို့ငှာဗို့အားစမ်းသပ်သူ ၁ ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်ဤလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်ကိုဖော်ထုတ်ထားသည်။2ခံနိုင်ရည်ဗို့အားစမ်းသပ်မှုကိုချိန်ညှိပါ။
DC Stabilized Power Supplies ၏အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းမှာဘာလဲ
သိပ္ပံနည်းကျသုတေသန၊ တက္ကသိုလ်များ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ စက်မှုနှင့်သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းများ၊ လျှပ်စစ်နှင့်ဓာတ်ခွဲခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဓာတ်အားသွင်းကိရိယာများတွင် DC Power supply အားစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ DC Power supply ကိုယခုအခါအမျိုးသားကာကွယ်ရေး၊ သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသန၊ တက္ကသိုလ်များ၊ သို့သော်တိုးပွားလာသောငါတို့နှင့်အတူ ...
High-Power ကို DC ကအီလက်ထရောနစ်ဝန်
High-Power DC Electronic Load Programmable DC Electronic Load တွင် 200V, 600V နှင့် 1200V Voltage Plans နှင့် Ultra-High Power Density ရှိသည်။ CV / CC / CR / CP အခြေခံစစ်ဆင်ရေးနည်းလမ်း ၄ မျိုးနှင့် CV + CC / CV + CR / CR + CC ပေါင်းစပ်စစ်ဆင်ရေးနည်းလမ်း ၃ မျိုးကိုပံ့ပိုးသည်။ Over-current၊ Over-Power၊ အပူချိန်လွန်ကဲခြင်းနှင့်အတူ ...
မူပိုင်ခွင့်© 2021 Shenzhen Meiruike Electronic Technology Co. , Ltd. Featured ထုတ်ကုန်များ, Sitemap, မြင့်မားသောဗို့အားစံကိုက်ညှိမီတာ, 1000v- 40kv ဒစ်ဂျစ်တယ်မီတာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်အမြင့်ဗို့အားမီတာ, High-Voltage ဒီဂျစ်တယ်မီတာ, ဗို့အားမီတာ, မြင့်မားသောဗို့အားမီတာ, ထုတ်ကုန်အားလုံး